‘नेपाल प्रहरीको नाम फेरेर ‘नेकपा प्रहरी’ राखौँ’-सांसद डा. अमरेश सिंह::Point Nepal
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा नेपाल प्रहरीको भूमिकालाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।आइतवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका एकजना सांसदले प्रहरीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश सिंहले आफ्ना नेता कार्यकर्ता कुटिँदा पनि प्रहरी रमिते बनेको आरोप लगाए। उनले भदौ २६ गते बाँकेको खजुरामा कांग्रेस कार्यकर्तामाथि नेकपा कार्यकर्ताबाट भएको आक्रमणका क्रममा घटनास्थलमै रहेको प्रहरीले केही गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे।
नेपाल प्रहरीको नामसमेत फेर्नुपर्ने भन्दै उनले कटाक्ष गरे। ‘नेपाल प्रहरीको नाम अब नेकपा प्रहरी राखौँ’, उनले भने, ‘घटनास्थलमा प्रहरी हुँदा पनि आक्रमण रोक्न पहल गरेन। राजनीतिक निर्देशनमा यो घटना भएको हो।’
काठमाडौं । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘नेपाल आइडल’ सिजन ३ को मुख्य प्रायोजन कोका–कोलाले गर्ने भएको छ ।
आइडलले देशभरका विभिन्न शहरहरुमा तेस्रो सिजनको अडिसनको घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा पहिलोपटक कोका–कोलाले गायन प्रतियोगितामा प्रायोजन गरेको हो ।
नेपाल आइडलको सिजन १ र २ दर्शकले निकै रुचाएपछि आयोजकलाई तेस्रो सिजन गर्ने उर्जा मिलेको छ । पहिलो र दोस्रो सिजनमा न्ह्यू बज्रचार्य, कालिप्रसाद बाँस्कोटा र इन्दिरा जाशी जजको रुपमा रहेका थिए